How kuita ILS kumhara mu FSX pamwe PA380
mubvunzo How kuita ILS kumhara mu FSX pamwe PA380
1 gore 10 ago #480 by JanneAir15
Mhoro! Saka ndinoda kuziva sei kuti ILS achiwana muna FSX pamwe Project Airbus A380. Ndatova Munoziva kuti ILS kumhara dzimwe ndege asi nokuti Project Airbus nzvimbo yemutekenyi ndiyo zvishoma zvakasiyana Handina chokwadi kudaro. Handina kuita ILS achiwana pamwe ndege asi hazvina kushanda kunze. Nenzira Ndaiva rakapotsa nzvimbo yemutekenyi. Pane mabhatani siyana? Uye ndege ndiyo Air France A380 VC kubva panzvimbo iyi. Ndapota ndibatsireiwo pamwe ichi.
1 gore 10 ago #483 by Gh0stRider203
Ichokwadi, I zvikurukuru #FlyBoeing mazuva ano (the DC-10 uye Concorde ari maviri kunze huru lol), asi ndinoziva unofanira dhayira muna ILS Freq kupinda Nav1, uye ipapo kuchinja GPS kuna Nav (kazhinji ndine rinopisa anokosha nokuti, pane My nyaya Ctrl kusuduruka N). Handisi kuti aiziva Airbus asi ndinoziva pamusoro 747 (ndiro zvandiri kunyanya kubhururuka nekuti chinoita zvikuru $), nemiwo kusarudza APP (nzira) kundoitora kukiya kuna ILS. hazvizovi kiya kuti papfungwa kunzvimbo yakatenuka, saka ini gotta kuita kuti manually, asi ndizvo chaizvo nyaya nokugadzirisa vert nokukurumidza.
Ndinovimba izvi zvinobatsira! ROMBO RAKANAKA!
Time chokusika peji: 0.428 mumasekonzi